'उत्तर र दक्षिणको कठपुतली बन्दा देश द्वन्द्वमा जान्छ'
अन्नपूर्ण आइतवार, माघ ७, २०७४ 7285 पटक पढिएको
डा.बाबुराम भट्टराई–अन्नपूर्ण संवाद
निरपेक्ष भाव देखिन्थ्यो डा. बाबुराम भट्टराईको अनुहारमा । भर्खरैको चुनावमा उनले जितेका थिए, उनको पार्टीले हारेको थियो । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै माओवादी पार्टी त्यागेर वैकल्पिक ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ बनाइछोड्ने उनको आह्वानलाई मतदाताले भर्खरैका तीन तह चुनावमार्फत उत्साहपूर्वक लिएनन् । विशालनगर निवासमा शनिबार दिउँसो अन्नपूर्णसँग संवादका क्रममा उनले खुला-खुला सकारे- पार्टी स्थापनायताका आफ्ना रणनीतिहरू त्रुटिपूर्ण भएकाले पराजय भोग्नुपर्‍यो । उनले फागुन दोस्रो साता लुम्बिनीमा विस्तारित बैठक राखेर पूरा समीक्षा गर्ने सुनाए । अनि संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका एजेन्डामा ठूला पार्टीहरू स्पष्ट नरहेको भन्दै त्यसले ल्याउन सक्ने जटिलताबारे संकेत गरे । अन्त्यमा, भारत र चीनबीच बढ्दो तनावका कारण नेपालले अपनाउनुपर्ने मार्गचित्र पनि औंल्याए । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग राजाराम गौतम र बसन्त बस्नेतको कुराकानी :
तपाईं पहिले-पहिले ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन भयो, तर तपाईं किन बाहिर पर्नुभयो ?
इतिहासमा अक्सर यस्तो हुन्छ । नीति विचार निर्माण गर्ने मानिसहरू थोरै हुन्छन् । त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग र विकास गर्दै जाँदा आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलनले नेतृत्व निर्माण गर्छ । कतिपयले लोकतन्त्र र वामपन्थ फरक छन् भन्छन् । संविधानसभाबाट हामीले राजनीतिक लोकतन्त्रको सापेक्ष प्राप्ति गर्‍यौं । त्यसलाई अझै उन्नत बनाउन केही समयलाई अब आर्थिक लोकतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ । मैले त्यसैलाई ‘समृद्धि’ भनेर परिभाषित गर्न खोजेको हो । तर नेपालमा हाम्रो अल्पचेतना र न्यून सांस्कृतिक स्तरले गर्दा विषयवस्तु गहनतामा नगई सतही रूपमा पदावलीलाई टिप्ने, त्यसैका पछाडि छिनाझपडी गर्ने चलन छ । त्यसैले हाम्रो समृद्धीकरणको शब्दचाहिँ सबैले ग्रहण गरे । तर नेपाल किन समृद्ध हुन सकेन, अब समृद्धि बनाउन चुनौती के-के हुन् भन्ने विषयमा अझै छलफल पुगेको छैन ।
चुनावमा वाम गठबन्धनले स्थिर सरकारको जनादेश पायो । तपाईंका एजेन्डा त अब यसैले अघि बढाउला नि ?
कुनै पनि राज्य शून्यमा रहन सक्दैन । अग्रगामी विकल्प पाएन भने बरु कहिलेकाहीं पछाडि नै फर्कने विकल्पमा पनि जाला । हामीकहाँ मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धा पुरानै शक्तिहरूबीचमा भइरहेको थियो । उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट ब्रान्डमा उभ्याउँदै आए पनि खासमा पुरानै शक्ति हुन् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट ब्रान्डको सारतत्वमा अब त्यति अन्तर छैन । हिजो शीतयुद्धकालमा उदारवादी लोकतन्त्र र साम्यवादी विचारका दुई भिन्न पक्षधरका रूपमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट आएका थिए । यहाँसम्म आइपुग्दा कांग्रेस पनि हिजोको बाटोमा रहेन, कम्युनिस्ट पनि छैनन् । अहिलेको प्रतिस्पर्धा विचारमा भन्दा पनि को बलियो छ भन्नेमा हो । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले आज बहुमत पाए पनि देशका समस्या उनीहरूले समाधान गर्छन् भन्नेमा मलाई शंका छ ।
हिजो उनीहरूसँगै काम गरेर आएकाले अब यसलाई अघि बढाउनेमा तपाईंको भूमिका पनि होला नि ?
मेरो भूमिका यसभित्रका अन्तर्विरोधहरू व्याख्या गर्ने नै हो । नेपालमा आर्थिक-सामाजिक-क्षेत्रीय-जातीय विविधताले लोकतन्त्रको समुन्नतीकरणमा खडा गरेका चुनौती र सँगसँगै नेपालको भूराजनीतिक जटिलता- यी दुई पक्षलाई ठीक सम्बोधन नगरी न त नेपालमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ, न समृद्धि नै हासिल हुन्छ । हामीले नयाँ शक्ति अभियानमार्फत यसैबारे बहस गर्न खोजेका हौं । सुरुमा प्रस्ट ढंगले विषय राख्न सकिएन होला । आगामी दिनमा अझै प्रस्टता र गम्भीरतापूर्वक यी विषय उठाउँछौं । त्यो नयाँ विचारलाई हामी नयाँ शक्तिमा रूपान्तरण गर्छौं ।
तपार्ईं आफैं वाम गठबन्धनको एक अभियन्ता भएर आइसक्नुभएको थियो । किन एक्कासि पछि हट्नुभएको ?
हामीले दुई वर्षअघि वाम-लोकतान्त्रिक शक्ति र समुन्नत समाजवादी शक्तिका रूपमा नयाँ शक्तिको परिकल्पना गरी अभियान थाल्यौं । त्यसपछि तीनवटा चुनाव सँगसँगै आए । अत्यन्तै षड्यन्त्रमूलक ढंगले चुनाव चिह्नबाट हामीलाई वञ्चित गरियो । त्यसपछि हामीले चिह्नका लागि पुरानै शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने जुन नीति लिन बाध्य भयौं, त्यसपछि नै नयाँ शक्ति निर्माण अभियान लिकबाट अलिकति बाहिर गयो । हामी कहिले कता, कहिले कताजस्तो देखिन पुग्यौं । अभियानमा गतिरोध आयो । त्यहीबेला समाजवादी ध्रुवीकरण हुन्छ कि भन्ने किसिमको संकेत देखिन गयो ।
संघीय समाजवादी फोरम, माओवादी, एमाले र नयाँ शक्तिले आफूलाई नयाँ समाजवादी शक्ति वा वाम लोकतान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना हुन्छ कि भनेर असोज १७ मा हामी त्यसमा सहभागी भयौं । तर तुरुन्तै कस्तो परिस्थिति देखा पर्‍यो भने नयाँ समाजवादी शक्ति बनाउनुको साटो पुरानै दलहरू मिल्ने अनि बैंकहरूको मर्जरजस्तो गरेर बजार कब्जा गर्न खोज्ने स्थिति देखियो । पार्टी मर्जर गरेर मत कब्जा गर्न गरिएको गठबन्धन भएको आभास हामीलाई भयो । त्यसले तत्काललाई फाइदा पुगे पनि समाधान दिँदैनथ्यो । सानो पुरानो शक्तिको विकल्पमा ठूलो पुरानो शक्ति बनाएर अर्थ हुँदैनथ्यो । त्यसैले हामी फर्कन बाध्य भयौं । चुनावको मुखमा हामीसँग विकल्प थिएन । त्यसैले सामान्य किसिमका तालमेल गरेर अस्तित्व रक्षा गर्न हामी लाग्यौं । हामी अझै पनि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरिछोड्ने अभियानमा छौं ।
असोज १७ को सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा तपाईंलाई एमाले र माओवादी अब तपाईंले खोजेजस्तै पार्टी बन्छन् भन्ने साँच्चिकै परेको थियो ?
खासमा हामीले उपेन्द्र यादवको फोरम, प्रचण्डको माओवादी र नयाँ शक्तिका बीचमा भित्री कुराकानी गरेर नयाँ ढंगले तालमेल प्रयास गरिसकेका थियौं । असोज १४ गते यी तीन पक्षका बीचमा तालमेल गर्ने समझदारी भएको थियो । तर एमाले र माअ‍ोवादीबीच अलग्गै ढंगले वार्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको रहेछ । १७ गते उहाँहरूले त्यसको घोषणा गर्ने तयारी पनि गर्नुभएछ । हामीले बुझ्यौं- एमाले पनि त्यसमा सहभागी हुन्छ र नयाँ खालको समाजवादी धार निर्माण हुन सक्छ । म आफूले पनि ओलीजीसँग कुरा गर्दा उहाँले त्यस्तै किसिमको आभास दिनुभयो । हामीले पनि सहज विश्वास गरिहाल्यौं । अन्तर्यमा त्यस्तो होइन रहेछ । हामी अलिकति भ्रमित हुन पुगेछौं ।
दोस्रो सेटब्याक भएछ, किनकि पहिलो सेटब्याक त उपेन्द्रसँग सहकार्य प्रयासमै भइसकेको थियो ।
हो, हामीलाई चुनाव चिह्न नदिइनु अलोकतान्त्रिक र षड्यन्त्रमूलक हर्कत थियो । त्यसैले हामी पुराना शक्तिसँग तालमेल गरेर जाने बाध्यात्मक स्थितिमा थियौं । त्यसैको शृंखलामा वाम तालमेल अनि लगत्तै कांग्रेससँग तालमेल- यी तीनवटा प्रसंग एउटै कडी थिए । यी हाम्रो चाहना र रुचिभन्दा पनि बाध्यताका उपज थिए । बीचमा वामसँग नयाँ ध्रुवीकरण बन्छ कि भन्ने सम्भावनालाई अलि रणनीतिक ढंगले सोच्न खोज्यौं, तर त्यस्तो देखा परेन।
उसो भए यो वैचारिक प्रश्नभन्दा पनि नेतृत्वको इगो व्यवस्थापनको विषयजस्तो देखिन पुगेछ !
मेरो सन्दर्भमा त्यस्तो हुँदैन । कुनै पनि पदमा नबसे पनि काम गर्न जहिल्यै तयार हुन्छु । यो देशको सामाजिक विकासक्रम, भूराजनीतिक जटिलता हल गरेर समाधान दिने कुरा मुख्य कुरा हो, मेरा लागि । त्यसैले नयाँ विचार, नीतिसहितको नयाँ शक्ति परिकल्पना गरेका हौं ।
अहिले वाम शक्ति बलियो भएका बेला तपार्इंंका विचारलाई यसैभित्र सम्बोधन गर्न सकिन्न ?
सामान्य सुधार त जहिल्यै गर्न सकिन्छ । पञ्चायतका बेलामा पनि सामान्य सुधारका काम भएका थिए । केशरजंग रायमाझीलगायत कतिपय वामपन्थीले यसै कारण पञ्चायतभित्र सुधार खोज्ने प्रयास पनि गरे । पछि नेपाली कांग्रेसको एउटा तप्काले पञ्चायतभित्र अलिअलि सुधार कोसिस गर्‍यो । तर त्यसले आधारभूत समस्या हल भएन ।
अहिलेको अवस्थालाई पञ्चायतसँग तुलना गर्न मिल्छ र ?
संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनसम्म मैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरें । तर म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु- नेपालको भूराजनीतिक जटिलताका कारण कुनै पनि क्रान्तिलाई हामीले पूर्णतामा पुर्‍याउन सकेनौं । बीचैमा पुराना र नयाँ क्रान्तिकारी शक्तिका बीचमा सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था पटक-पटक आयो । २००७, २०४६ र २०६२÷६३ सालमा यस्तै अवस्था आयो । मैले यसलाई हलाल क्रान्ति भन्ने गरेको छु । यसमा पुराना शक्तिहरू नयाँ सम्झौतामा प्रवेश गर्न त गर्छन्, तर पुरानाको गुरुत्वाकर्षणले अन्ततः नयाँ शक्तिहरूलाई सहवरण गरिदिन्छ । हाम्रो हकमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा त गरियो, तर जारी गर्ने र लागू गर्ने क्रममा पुराना संस्थाहरू हावी छन् । अहिले न्यायपालिका, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्रका कुरा उठिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूको चरित्रको कुरा पनि छ, जसलाई रूपान्तरण गर्न हामीले सकेनौं । औपचारिक ढंगले हामी संघीय गणतन्त्र भन्यौं, अन्तर्वस्तुमा तपार्इंले हेर्नुभयो भने पुराना शक्ति र संरचना नै हावी हुँदै गएको पनि हामी देख्छौं । त्यसैले नयाँ ढंगको क्रान्तिको आवश्यकता म देख्छु । हिंसात्मक, उथलपुथलको क्रान्ति होइन, जनदबाब र जनअभियानमार्फत हिजोका परिवर्तनलाई पूर्णतामा पुर्‍याउने अभियान आवश्यक छ ।
तर गठबन्धनका मुख्य नेता ओलीले तपाईंको पनि भूमिका खोजिरहेको गाइँगुइँ छ नि ?
भेटघाट भएको हो तर बाबुराम भट्टराईले त्यहाँ प्रवेश गरेर भूमिका खेल्ने त कल्पनाबाहिरकै कुरा हो । हुन त म भूमिका नलिई भुइँतहमै बसेर काम गर्न सक्ने पनि मानिस हुँ । तर म देखिरहेको छु, यो संविधानले संघीय गणतन्त्रका जुन मान्यता प्रतिपादन गरेको छ, त्यसलाई यिनै शक्तिबाट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा प्रश्न छ । अहिले तोकिएका अस्थायी प्रादेशिक मुकामलाई आगामी प्रदेश सभाले फेर्न त सक्छ । तर अहिले तोक्ने बेलामै जुन सुझबुझ देखाउनुपथ्र्यो, त्यो त देखिएन । प्रदेश २ र ४ को राजधानीचाहिँ संघीयताको मर्मअनुरूप देखिन्छ । मुख्य जातिको थातथलोमा राख्नु नै संघीयताको मूल मर्म थियो । अरूमा चाहिँ न त क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाइएको छ, न त जातीय थातथलो मिल्छ । यसले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूमा संघीयतासम्बन्धी बुझाइमा गम्भीर त्रुटि छ भन्ने देखाउँछ । आगामी दिनमा यसले समस्या ल्याउनेछ ।
यी असहमतिहरूका बीच तपाईं वाम एकता प्रक्रियामा जाने सम्भावना कति बाँकी होला ?
राजनीतिक लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउन विकास र समृद्धिको एउटा चरणबाट गुज्रनुपर्छ । जुन ढंगले नीतिहरू अघि सार्न सक्नुपर्छ अनि जसरी देशभित्रको आन्तरिक एकता र भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ, त्यतापट्टि पनि यी पुराना शक्तिहरूको ध्यान गएको देख्दिनँ । त्यसैले यी शक्तिहरूबाट यो संविधान ठीक ढंगले कार्यान्वयन भएर देश शान्ति र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सम्भावना म देख्दिनँ । त्यसैले त्यहाँ सामेल हुने सम्भावना छैन । दलहरूको जुन चिन्तन र चरित्र छ, त्यसबाट विकास र समृद्धि हुँदैन । उहाँहरूले रूपमा वाम भने पनि सारमा म मान्दिनँ ।
एमालेका सबैजसो नेताहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुहुन्छ । जबकि यी दुई क्षेत्र मुनाफाका क्षेत्र नै होइनन् । यी त सेवाका क्षेत्र हुन् । यसैमा मुनाफा लिएर पार्टी र नेता चलाउने परिपाटी रहेसम्म उहाँहरूले कसरी विकास र समृद्धि ल्याउनुहुन्छ ? अहिले डा. गोविन्द केसीले जुन अभियान चलाउनुभयो, त्यसमा हामीजस्ता मानिसहरू साथ दिन लागिरहेका छौं । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हेर्ने ‘वाम’ हरूको सोच नै वामपन्थी छैन । कुन क्षेत्रचाहिँ राज्यले हेर्ने हो र कुनचाहिँ निजी क्षेत्रले भन्नेमा उहाँहरूको प्रस्टता छैन । यस्तो अन्योलले विकास र समृद्धि हुँदैन । विकास, पूर्वाधार, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र राज्यले हेर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, सेवा, उद्योगचाहिँ निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
सहकार्य पनि सम्भव छैन ?
उहाँहरूमा रूपान्तरण होला भन्ने झीनो आशा मैले असोज १७ गते लिएको थिएँ । फोरम, माओवादी, एमाले र नयाँ शक्ति मिलेर नयाँ समाजवादी शक्ति बनाउने सम्भावना अब अन्त्य भयो । उहाँहरूको एकता अभियानमा विचारको बहस छैन, कसले के पद लिने भन्ने मात्रै छ । यसले रूपान्तरण, ध्रुवीकरण होइन, बैंकको मर्जरमा सीईओ र चेयरम्यान को हुने भन्ने किसिमको संकेतमात्रै गर्छ । यसले नयाँपन दिँदैन ।
उसो भए तपार्इंको भूमिका यिनै डिस्कोर्सहरूमा सीमित हुन्छ ?
कुनै पनि नयाँ शक्ति सुरुमा एउटा विचार र परिकल्पनामै पैदा हुन्छ । संगठित स्वरूप लिएर आन्दोलनका रूपमा जनतामा स्थापित हुन्छ । पार्टी त्यसरी बन्छ । हिजोका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी पार्टी यही प्रक्रियाबाट विकसित भएका हुन् । हाम्रो नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियान पनि त्यही ढंगले अघि बढ्छ । यो प्रक्रियाले केही समय लिन्छ । स्थापनाको एक वर्षमै वैकल्पिक शक्ति बनेन भनेर सोच्नु सही हुँदैन । नयाँ शक्तिमा लागेका साथीहरूको बुझाइमा यहाँनेर त्रुटि रह्यो । म आफैंले पनि त्यसलाई ठीक ढंगले बुझाउन सकिनँ । तुरुन्तै ठूलो शक्ति बन्न सकिन्छ भन्नु सही होइन ।
यो त अरूको त्रुटिको कुरा भयो, आत्मसमीक्षाचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?
चुनावकेन्द्रित आवश्यकताका आधारमा सहकार्य गर्न खोज्नु हाम्रो त्रुटि हो । किनभने एकै वर्षमा यति ठूला चुनावहरू सामना गर्ने वैकल्पिक शक्ति बन्दैनथ्यो । ठूलो वैकल्पिक शक्ति तुरुन्तै बनाउनेभन्दा पनि सानो तर राम्रो वैकल्पिक शक्ति बनाउनेमा हामीले ध्यान दिनुपथ्र्यो । यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्ने भएका छौं ।
फोरमसँग एकता प्रक्रिया त घाँटी-घाँटीमै आइसकेको थियो होइन ? एकताको मितिमात्रै घोषणा गर्न बाँकी थियो भन्नुहुन्थ्यो ।
त्यसमा पनि हाम्रो आलोकाँचोपन देखा पर्‍यो । कतिपय मुद्दाहरू टुंगिन बाँकी नै थिए । साथीहरूले हौसिएर भनिहाल्नुभयो । स्थापनाकालमा अति उत्साही भएर प्रवेश गर्ने साथीहरूले नयाँ शक्तिको मर्म बुझ्नुभएको रहेनछ । नयाँ शक्तिलाई घोडा बनाएर छिटै सत्ताको भर्‍याङ चढ्ने उहाँहरूको मनसाय रहेछ । मैले पनि बुझाउन सकेनछु । वैकल्पिक धार बनाउने अभियानले केही समय लिन्छ है भनेर बुझाउन सकिएन । पुराना शक्तिहरूसँग तालमेल गर्ने सोच त्रुटिपूर्ण रह्यो । त्यसले हाम्रो नयाँ वैकल्पिक पहिचान गुम्न पुग्यो ।
तपाईं नजानिँदो ढंगले जातीयताको पैरवी गर्नुहुन्छ भनेर तपाईंकै शुभचिन्तक पनि भनिरहेका हुन्छन्, के भन्नुहुन्छ ?
(हाँसो) हो, गुदी कुरै यहींनेर छ । एक्काइसौं शताब्दीको लोकतन्त्र सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्र हो । उदार लोकतन्त्र र समाजवादी लोकतन्त्र भनेर पहिले भनिन्थ्यो । त्योभन्दा माथि उठेको एक्काइसौं शताब्दीको लोकतन्त्र समावेशी र सहभागितामूलक हुन्छ । त्यसले देशका विभिन्न जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई पूर्णरूपले सहभागी बनाउने कुराको पक्षपोषण गर्छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषी, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक हो । विभिन्न वर्गमा विभाजित समाज छ । यो सबैको सहभागिता राज्यसत्तामा सुनिश्चित गरिएन भने त्यो नाममात्रैको लोकतन्त्र हुन्छ । म जातीयताको कुरा गरिरहेको छैन, बरु हिजो यसैका नाममा विभाजन गरेर टाठाबाठा जाति र वर्गले शासन चलाउँदै आए । लोकतन्त्रको युगमा पनि त्यही ढंगले चलाउने सोच राख्छन् । त्यो सही अर्थमा लोकतन्त्र थिएन भन्नेमा म दृढ छु । यसको अर्थ अन्धजातिवाद र पृथकतावादको पक्षपोषण गर्नेहरूसँग म सहमत छैन । मैले नेपालको इन्द्रधनुषी राष्ट्रियताको कुरा गर्ने गरेको छु । हाम्रो मुख्य र साझा पहिचान नेपाली हो । हामी नेपाली मधेसी हौं, नेपाली जनजाति हौं, नेपाली आर्यखस हौं, नेपाली थारू हौं । सबै समुदायबीच एकताले बनेको नेपाल नै इन्द्रधनुषी नेपाल बन्छ भन्ने मेरो अवधारणा हो । यो नहुन्जेल राष्ट्रिय एकता सुनिश्चित हुँदैन । लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन । आन्तरिक राष्ट्रियताबिना विकास पनि बलियो हुँदैन । एकल जातीय अन्धराष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्ने र संकीर्ण जातीयतावाद र पृथकतावादको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति छन्, त्यसका विरुद्ध नेपालमा केही समयसम्म संघर्ष चल्छ । अनि सही अर्थको समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा हामी जान्छौं ।
तपाईंले जुन संघर्षतिर इंगित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रश्न त संविधानले हल गरिसक्यो, होइन ? अघि तपाईं नै राजनीतिक संघर्षको चरण सकियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो !
कसरी हल गर्‍यो ? त्यसलाई लागू गर्नेभन्दा पनि उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ । संवैधानिक समितिको सभापतिका रूपमा संविधानसभामा मैले यी समस्या जुन ढंगले समाधान गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, त्यसलाई पूर्णतामा पुर्‍याउन सकेको भए संघर्ष पूर्ण हून्थ्यो । त्यसैले मैले यो परिवर्तनलाई आधा गिलास खाली र आधा भरी भन्ने गरेको छु । आधारभूत रूपमा सकिएको हो, तर समाधान गर्नुपर्ने प्रश्न बाँकी छन् । संघीयताको विषयचाहिँँ नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको हो । नत्र किन ल्याउनुपर्‍यो ! क्षेत्रीय विकासको अवधारणा पञ्चायतकालमा बनेकै थियो । पाँच विकास क्षेत्र बनाउँदैमा समस्या हल भएन । लहडमा आएर वा जनतालाई ठग्न त्यो भनिएको होइन । अहिले राजधानी तोक्दा पनि ध्यान दिइएन ।
उदाहरणका लागि प्रदेश १ किरातबाहुल्य प्रदेश हो । त्यहाँ खसआर्य र जनजाति, मधेसी पनि छन्, तर मूलरूपमा किरात राई र लिम्बुकै प्रधानता छ । त्यसैले मुकाम राख्दा कि त उनीहरूकै बाहुल्य भएको ठाउँ वा पायक पर्ने थातथलो हेर्नुपर्ने थियो । संघीयताका मर्म त्यसअनुरूप हुन्थ्यो । विराटनगर र आसपास भनेको पहिलेदेखि नै विकसित ठाउँ थियो । क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि मुकाम राख्ने हो भने धरान या पहाडको कुनै ठाउँलाई राजधानी बनाउनुपथ्र्यो । उता अखण्ड सुदूरपश्चिम भनेर कांग्रेस र कम्युनिस्ट सबैका नेताले प्रदेश ७ लाई बनाए । सदरमुकाम धनगढीमा राखे । खसआर्य बाहुल्य डोटी डडेलधुरा, जुन पिछडिएको पहाडी इलाका हो, त्यता पनि राखिएन । पञ्चायतकालमा पनि डोटीको परिकल्पना यसरी गरिएको थियो । उता कैलालीको थारूबहुल क्षेत्रलाई पाँच नम्बरको थारूबहुल क्षेत्रमा राख्नुपथ्र्यो । त्यो पनि उहाँहरू नमान्ने । न त त्यो थारूको हितमा भयो, न त खसआर्यको हितमा । न त क्षेत्रीय सन्तुलन भयो । यस्ता क्रियाकलापले संघीयताको ठीक ढंगले कार्यान्वयन नहुने खतरा म देख्दै छु ।
प्रदेश मुकामको विवाद समाधानका उपाय के देख्दै हुनुहुन्छ ?
तत्काल दलहरूका बीचमा प्रभावकारी संवादमार्फत सहमति कायम गरी टुंगो लगाउनुपर्छ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेसले चुनाव हारिसकेपछि कामचलाउ हैसियतमा सरकार चलाइरहेको हो । उसले चुनाव जित्नेहरूको सहमति लिएर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । प्राविधिक रूपमा सत्ता तत्कालै हस्तान्तरण गर्न नमिले पनि अनौपचारिक ढंगले सहमति खोजिनुपथ्र्यो । हिजो हामीसँग शान्तिप्रक्रिया चल्दा ठूला विषयहरू सहमतिबाटै हल हुन्थे । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा यसरी सरकार एकपक्षीय ढंगले अघि बढ्नु हुँदैनथ्यो । सरकारले यसो गरेको भए जितेको पक्षले पनि खुट्टा अड्काएर लडाउने खेलमा सहभागी हुँदैनथ्यो । एकले अर्कालाई पछार्ने अहिलेको खेलबाट हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि गुमाउने वा पछाडि पार्ने खतरा हुन्छ ।
समग्रमा भन्दा यसैका कारण संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा चुनौतीको सिकार भएको तपार्इंंको मूल्यांकन हो ?
हो, समृद्धिमा जाने हो भने पहिले देशभित्रको विविधता सम्बोधन गरेर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतामा जानुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ । ठूला दुई शक्ति अहिले द्वन्द्वतिर गइरहेका छन् । आगामी दिनमा यो द्वन्द्व अझै बढ्ने संकेत छन् । यस्तो अवस्थामा भारत र पश्चिमा राष्ट्र एउटा लबीमा, चिनियाँ पक्ष अर्को लबीमा भए पनि नेपाल अर्को द्वन्द्वको भुमरीमा पनि पर्न सक्छ । यस्तोमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बढाउन अझै ध्यान दिनुपर्छ । तर यहाँ दुईवटा पुराना शक्तिमध्ये एउटा दक्षिण र अर्को उत्तर फर्केको अवस्थामा प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन् । शक्तिहरूले पनि यस्तो बेला स्वतः आफ्नो पपेट (कठपुतली) बनाउन खोज्छन् । एउटा उत्तरको कठपुतली र अर्को दक्षिणको कठपुतली भयो भने देश द्वन्द्वतिर जान्छ ।
तपाईंले आसन्न वाम सरकार चिनियाँबाट प्रवद्र्धित छ भन्न खोज्नुभएको ?
कोही कसैबाट प्रवद्र्धित छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । तर उहाँहरू अत्यन्त उत्ताउलो ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । पपुलिस्ट ढंगले जनमत लिन अभिव्यक्ति दिने गर्नुहुन्छ । यस्ता गतिविधिले चिढ्याउने र भड्काउने मात्रै गर्छ । यस्तो चरित्र वामको हुँदैन । कम्युनिस्ट त झन् हुँदै होइन, नाममात्रै हो ।
ओलीले अन्नपूर्णसँग भनि नै सक्नुभयो नि, ‘हामी त पोलिटिकल कम्युनिस्ट’ भनेर ... !
त्यो भन्दा पनि क्रोनि क्यापिटलिज्म भन्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यसत्ताको दोहन गरेर सीमित व्यक्तिहरूले साधनस्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हो । यसलाई आसेपासे पुँजीवाद भन्दा हुन्छ । पुराना कम्युनिस्टहरूले नोकरशाही ढाँचामा यसैलाई संरक्षण दिएका छन् । एमालेको त माथिदेखि तलैसम्म यस्तो संरचना छ । कर्मचारीका ट्रेड युनियनदेखि राज्यका सबै अंगमा आफ्नो सञ्जाल बनाउने यस्तो काम सारमा वामपन्थी होइन । रूपमै भए पनि बाह्य शक्तिले यसैलाई कम्युनिस्ट बुझ्छन् । चुनावमा भोट ल्याउनका लागि उहाँहरूले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट लाभ लिनुभयो । राष्ट्रवादको भाव जगाएर यो लाभ लिए पनि चरित्रचाहिँ सारमा क्रोनी क्यापिटलिस्ट छ । भनाइ र गराइको यो अन्तर्विरोधबाट उहाँहरूले सही नीति लिन सक्नु हुन्न । विकास र समृद्धिको वाधक अन्ततः यही प्रवृत्ति बन्ने छ ।
हामी भारत र चीनको कुरा गर्दै थियौं । तपाईं दुवै देशबीच नेपाललाई गतिशील पुल बनाउने भन्नुहुन्थ्यो । सम्भव छ ?
राजनीतिक अर्थशास्त्रको विश्लेषणबाट मैले यो कुरा भन्ने गरेको हुँ । ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचबाट उनीहरू आउँदैछन् । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर ठूलो परियोजना ल्याइरहेको छ । भारत पनि पछिल्लो चरणमा अफ्रिकालगायत विभिन्न देशसम्मै लगानी फैलाइरहेको छ । पुँजीले बजार विस्तारको माग गर्छ । उनीहरूसँग पुँजी छ, बजारको खोजी गर्छन् । ठीक यता हामीसँग चाहिँ पुँजी अभाव छ । दुईवटै देशको पुँजीलाई ठीक ढंगले उपयोग गरेर यहाँ पुँजी आयात र वस्तु निर्यात गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्यौं भने बिदेसिएका ५० लाख युवालाई श्रम बेचेर वस्तु आयात गर्ने कामबाट उल्ट्याउन सक्छौं । यसरी उत्तर र दक्षिण दुवै बजारबाट लाभ लिनुपर्छ भन्ने मेरो अर्थराजनीतिक विश्लेषण हो । तर यस्तो बहस उठाउन हामीले सकेनौं, बरु पुरानै लोकप्रियतावादी कुरा गरेर एउटा उत्तरपन्थी र अर्को दक्षिणपन्थी देखिन खोजिरहेका छौं । यो नेपालको हितमा छैन । अहिले वीरगन्जमा सीमा विवाद छ, तपाईंहरूको पत्रिकाले पनि यो विषय उठाइरहेको छ । संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले सीमा टुंगो लगाएर हस्ताक्षर गर्ने भन्ने कुरो वर्षौंदेखि रोकिइरहेको छ । कालापानी र सुस्तामा मात्रै यो काम बाँकी छ । यति दुई ठाउँमा रोकिएकाले गर्दा वीरगन्जमा फेरि समस्या भयो । यसबाट दुई कुरा बुझ्नुपर्छ । कि त राज्यव्यवस्था सुतेर बसेको छ, कि त अनावश्यक उछाल्ने र पपुलिस्ट कुरा गरेर ध्यान अन्यत्र मोड्ने काम भइरहेको छ ।
यो सबै हुँदाहुँदै भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध किन सधैं घाउजस्तो भइरहेको ?
ठूलो र सानोबीचको सम्बन्ध जहिले पनि असमान नै हुन्छ । पानी माथिबाट तल बग्छ । अर्थतन्त्रको धारचाहिँ उल्टो बग्छ- कमजोरबाट बलियोतर्फ । सुगौली सन्धियता नै नेपाल-भारत सम्बन्ध असमान बन्दै गयो । त्यसले हामी आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गयौं । भारतले आर्थिक रूपमा नेपाललाई आफ्नो बजार मान्ने, रणनीतिक रूपमा हिमाललाई सुरक्षा घेरा मान्ने जुन सोच बनाउँदै आयो, त्यसलाई नेपालका शासक वर्गले ठीकसँग चिर्न सकेनन् । हामीले भारतसँग सैन्य ढंगबाट भिडेर हुँदैन, राजनीतिक वार्ताहरूबाटै सन्धि-सम्झौता परिमार्जन गर्ने गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा आर्थिक परनिर्भरता हटाउने अनि उसको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ ।
यो लुकाएर होइन, खुला गर्नुपर्छ । यही सोचबाट प्रधानमन्त्री छँदा मैले प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को अवधारणा ल्याएको हुँ । यो अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छ । म खुसी नै छु । कसरी अगाडि बढ्छ, हेर्न बाँकी छ । हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई अर्थराजनीतिक ढंगले हेर्नुपर्‍यो । नेपालमा यो विमर्श पटक्कै भएन । सिमानाको कुरा उठ्दा हामी तुरुन्तै संवेदनशील भइहाल्छौं, तर आर्थिक परनिर्भरता कति डरलाग्दो छ ? यता हेर्नै सक्दैनौं । व्यापार घाटा १५ गुणाभन्दा बढी भइसक्यो । निर्यातभन्दा आयात कति धेरै बढिरहेको छ । यसमा चर्चा हुँदैन । नेतृत्वमै अल्पज्ञान भएपछि जनताले यस्ता कुरा बुझ्दैनन् ।
सोमवार, फागुन ७, २०७४ 'सहिद परिवारलाई ५० लाख होइन, रोजगारी दिन्छौँ'
सोमवार, फागुन ७, २०७४ 'नाम र राजधानी जुन भए पनि विकास विकेन्द्रित हुन्छ’
आइतवार, फागुन ६, २०७४ 'समृद्ध प्रदेश बनाउँछौं'
आइतवार, फागुन ६, २०७४ भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिनँ
शनिवार, माघ २७, २०७४ सुरुवात एउटा मान्छेको सपनाबाट हुन्छ
आइतवार, माघ १४, २०७४ 'कांग्रेसमा संघीय गणतन्त्र बहसको विषय बन्नुपर्छ'
तीनकुने पुलमा बम आतंक (फोटोफिचर) 2729
हेलिकोप्टरले धानेको गाउँ 651
कोलकातामा नेपाल हाउस बन्ने 480
समावेशिता : व्यवहारमा कहिले ? 392
सानो युरोप र ठूलो जर्मनी 1037
स्टेसनरीमा आगलागी,साढे ४२ लाखको क्षति 106
पाँचथरमा एक हजार च्याब्रुङ प्रदर्शन (फोटोफिचर) 103
खेल उद्घाटन गर्ने क्रममा लडेर मेयरको हात भाँचियो 594
प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने रञ्जु दर्शनासहित एक दर्जन पक्राउ 524
प्रदेश-२ का मुख्य न्यायधीवक्ता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 951